Vakio ny 'Terms of Service' azafady alohan'ny fampiasana ny tranokalanay. Amin'ny alàlan'ny fidirana na fampiasana ny tranokalanay dia omenao ny fanekenareo hizara sy hampiasa ny vaovao atolotra anay amin'ny tranokalanay. Araka ny fepetran'ny tolotrasa ataonareo, dia ianareo 'Nanaiky' ary 'manaiky ' Ho an'ireo teny ireo amin'ny fampiasana ny tranokalanay amin'ny fomba rehetra.
Ny tranokalanay dia mety manana rohy maromaro amin'ireo tranonkala fahatelo. Tsy mifandray mivantana amin'ny iray amin'ireo tranonkala ireo isika. Ankoatra izany, ny fitaovana rehetra sy ny logos mifandraika dia TSY ary tompon 'andraikitsika. Ny fananana sy ny fanaraha-maso ny fananana ara-tsaina dia miaraka amin'ireo tompony. Tsy mandray andraikitra amin'ny fifandraisana amin'izy ireo isika.
Tsy misy ampahany amin'ny tranonkala dia natao hanolorana karazana fanolorana na fanomezan-toky. Tsy ho tompon'andraikitra amin'ny karazana fahasimbana rehetra ataonareo na ny orinasanareo ianareo noho ny fitsidihana na fampiasana ny tranokalanay ho an'ny tanjona rehetra. Tsy manao antoka isika na inona na inona hambara na tsikombakomba amin'ny fampahalalana sy ny tolotra omen'ny tranokalantsika.
Manakana ny zo hanitsy ny tsy fahamendrehana amin'ny votoaty ao amin'ny tranokalantsika isika raha tsy manome alalana mialoha. Tsy voatery hiantoka foana ny fahadisoana isika. Ankoatra izany, tsy mampanantena isika fa ny tranonkalanay dia ho afaka amin'ny fotoana rehetra. Ny fampahalalana ao amin'ny tranokalanay dia tsy bokim-bokim-bokim-bokatra ary tsy tokony hojerena ara-dalàna, ara-bola na ara-pitsaboana. Ny votoaty navoaka dia natao ho an'ny tanjona ho an'ny fampahalalana ary tsy manolo-kevitra amin'ny fifampiresahana matihanina.
Mampiasa ny vohikalanay amin'ny risika manokana ianao. Tsy tompon'andraikitra amin'ny mety ho vokany mety hitranga na amin'ny fifandraisany amin'ny fampiasana ny serivisinay na tranokala amin'ny endrika na amin'ny fomba hafa. Ny valim-pifidianana dia 100% anao na dia efa nanoro hevitra ny tranonkala momba ny mety ho very. Manaiky ianao TSY mba hitazona anay ho tompon'andraikitra amin'ny karazana fahaverezana, fahavoazana, na famotsoran-keloka na inona na inona toe-javatra, na mivantana izany na indirect, na vokatr'izany.
Na dia miezaka aza ny ezaka rehetra mba hahazoana antoka fa marina ny fampahalalana ao amin'ny vohikalantsika, dia tsy manome antoka ny fahamendrehany na ny fahafenoana. Tsy misy na inona na inona ao amin'ny lisansa momba an'ity tranonkala ity; a) Mamehy na manilika anao na ny andraikitsika noho ny ratra nahazo azy na ny fahafatesana vokatry ny fahamendrehana. b) Mamehy na manilika anao na ny andraikitsika noho ny hosoka na inona na inona. (c) Mamehy na manilika anao na ny andraikitsika amin'ny zavatra tsy avelan'ny lalàna. d) Mamehy na manafoana ny andraikitrao na ny andraikitra izay mety tsy ho voafehy amin'ny lalàna manan-kery.
Manome ny fepetran'ny tolotrasa amin'ny teny Anglisy ihany izahay. Amin'ny fampiasana ny vohikalanay, dia manaiky ianareo fa ny Terms amin'ny Service voavaha anay. Raha tsy manaiky ianao, dia voatery tsy hampiasa ny tranokalantsika. Na inona na inona toe-javatra iainanao, dia tokony hampiasa foana ny tranonkala raha tsy manaiky ny fepetra rehetra omen'ny tolotra omena antsika.
Amin'ny maha-orinasa tsy miankina sy tompona andraikitra voafetra, dia manana zo isika hiaro sy hametra ny lanjan'ny tenantsika manokana. Noho izany, tadidio ny fomba ampiasanao ny tranokalanay. Amin'ny toe-java-miseho, manaiky ianao fa tsy hitondra fitarainana amin'ny tranokalantsika na ny mpiara-miasa amintsika noho ny fitakiana na ny fahavoazana mety atrehanareo amin'ny fampiasana ny tranokalanay. Eo andaniny ihany, manaiky ianao fa ampy ny fahalalanao eo amin'ny tananao ny adiresin'ny tolotrasa mba hanaiky fa ny fiarovan-tenanay amin'ny tranonkalanay dia hiaro anay sy ny mpiara-miasa aminay amin'ny fanambarana rehetra napetraka aminay.
Raha toa ny ampahany amin'ny fanambaràn'ny tranonkala dia tsy mifanaraka amin'ny lalàna manan-kery, dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fampiharana ny fepetra hafa amin'ny serivisy voalaza ato amin'ity pejy ity. Ankoatra izany, manala ny trosa rehetra vokatry ny tranonkala hafa rehetra miaraka amintsika amin'ny fomba rehetra. Miasa amin'ny maha-olona an-davan'andro isika mba hanome vahaolana maimaimpoana amin'ny mpitsidika. Isika dia tsy mifandray mivantana na mifandray amin'ny iray amin'ireo toeram-ponenana manokana ao amin'ny tranonkala hafa.
Ny tolotra malalaka / fampahalalana malalaka dia omena "AS IS" miaraka amin'ny fiantohana na famenony mifandraika amin'izany. Noho izany, tsy manome antoka isika fa ny vahaolana omen'ny antsika dia hiasa mandrakariva. Miezaka manome anao maimaimpoana maimaim-poana izahay, saingy tsy afaka mampanantena izahay fa ny code dia hiasa 100% amin'ny fotoana. Ankoatra izany, tsy maintsy manaiky ny hamita ireo fepetra ilaina ianao hamahana ny fehezan-dalàna, izay mety mitaky anao hamita ny fanadihadiana amin'ny ankamaroan'ny tranga. Ny tsara indrindra amin'ny fahaiza-manaontsika, manandrana manolotra fanadihadiana "tsy misy vidiny" isika, fa ny firenena manokana. Noho izany, ny vola rehetra mifandraika amin'ny fanadihadiana dia tsy miankina amin'ny fari-piadidiany.
Manana ny fahefana hanova ny "Terms of Service" isika na oviana na oviana tsy misy fampandrenesana. Ny andraikitry ny mpampiasa dia ny hanohy ny fanovana ankehitriny. Ny mpampiasa dia hahita ny fepetra sy ny fepetra navaozina eto amin'ity pejy ity. Raha manana fanontaniana hafa momba ny fepetran'ny serivisy ao amin'ny vohikalantsika isika, dia tsidiho ny fahafahana manatona antsika.